Miisaaniyadda Golaha deegaanka Oslo oo Malaayiin krone Lagu Daray | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Miisaaniyadda Golaha deegaanka Oslo oo Malaayiin krone Lagu Daray
Waaxyada dowladeed ee qaabilsan xaaqista iyo nadiifinta waddooyinka barafku harqiyey ee caasimadda Oslo oo sannadkan baraf ka da’ay awgiis howl badan qabtay ayey arrintaasi qasabtay in la kordhiyo miisaaniyada golaha caasimadda markii tii hore gabaabsi noqotay.
Waaxda deegaanka ee Bymiljøetaten ayaa sheegtay in dhammaadkii janaayo uu baraf dhan 25500 oo tone uu fadhiistay ama ku degay magaalada Oslo halka sannadkii hore keliya 15000 tan oo baraf ah uu degay waqtigii qaboobaha oo dhan. Waxayna waaxdani ku qiimeeyeen qarashka ku baxaya hagaajinta barafka sannadkan 180 milyan, taasoo labo jibaar ka badan tii sannadkiii hore.
–Weli ma wada qaadi karno barafka oo dhan, sababtoo ah baaxadda iyo qaadka meelaha lagu shubo barafka. Meelaha qaar waa inaan barafka ku gurnaa hareeraha waddooyinka ayuu yiri agaasime Gerd Robsahm Kjørven oo madax ka ah Bymiljøetaten.